သိန္း 1000 မွ သိန္း 1500 ထိ ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများ
ဈေးနှုန်း သိန္း 1000 မွ သိန္း 1500 ထိ
ရန်ကင်းဘောက်ထော် ပြည်သာယာလမ်းမပေါ်ရှိ နှင်းကြာဖြူ Condo အမြန်ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10084142 အတွက် House Book (Myanmar) Real Estate Service Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
GRC condo ,4floor အခန်း​ရောင်းရန် (1300 သိန်း )
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10079840 အတွက် House Book (Myanmar) Real Estate Service Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10078105 အတွက် Myanmar Land Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10076399 အတွက် Great Pyi Taw Thit Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
(18'x60')အကျယ်၊ ရန်ကင်း၊ တပင်ရွှေထီးလမ်းမပေါ် ရှိ ပထမထပ် ရောင်းရန်ရှိ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10074668 အတွက် Land And Houses Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Yankin Condo 1300 Ls
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10073442 အတွက် Myanmar Land Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10073298 အတွက် Myanmar Land Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Yankin GRC Condo
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10067072 အတွက် Myanmar Land Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရန်ကင်းမြို့နယ် ကျောက်ကုန်းလမ်းမအနီး Mini Condo ရောင်းမည်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10064865 အတွက် Shwe Land Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10063101 အတွက် Myanmar Land Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်